चुनावमा धाँधली गरेको ट्रम्पको आरोप, भने -'मतदान बन्द भएपछी पनि भोटिङ किन ? ' | चुनावमा धाँधली गरेको ट्रम्पको आरोप, भने -'मतदान बन्द भएपछी पनि भोटिङ किन ? ' |
चुनावमा धाँधली गरेको ट्रम्पको आरोप, भने -‘मतदान बन्द भएपछी पनि भोटिङ किन ? ‘
वासिङटन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मतगणना जारी छ र पछिल्लो तथ्याङक अनुसार प्रजातान्त्रिक उम्मेदवार जो बिडेन बहुमतको नजिक छ। यद्यपि यस बीच, डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावमा धांधलीको आरोप लगाए र आफ्नो जीत भएको बताएका छन ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... नेकपा विवादकाबीच प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता : धुम्बाराहीको बैठक अनुचित !
यसैबीच डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरे र भने, ‘म आज राती बयान जारी गर्ने छु। ठूलो जीत। यस पछि, दोस्रो ट्वीटमा, उनले चुनावमा धांधली भएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हामी चुनावमा अगाडि छौं। नतिजालाई प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको छ र चुनावलाई धाँधली गर्ने प्रयास भइरहेको छ। हामी तिनीहरूलाई कहिले पनि त्यसो गर्न दिदैनौं। मतदान पछि किन भोटिङ किन ?’
यो पनि पढ्नुहोस् ... काभ्रेमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित पत्रकारको निधन
५३८ ‘इलेक्टोरल कलेज सिट’ मध्ये, बिडेन २३७ र ट्रम्प २१० ले अग्रता लिएको छ। बहुमतका लागि बिडेनलाई ३३ चुनावी भोट चाहिन्छ। बहुमतको लागि ३३ इलेक्टोरल आवश्यक छ। चुनावी मतको कुल संख्या ५३८ हो।
यो पनि पढ्नुहोस् ... नेकपा विवादमा राष्ट्रपति सक्रिय, शितलनिवास पुुगे प्रधानमन्त्री ओली